Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Ganacsi xiiso leh oo ka dhacaya IMEX America
Ganacsiga IMEX America ayaa ku socda
"Halkan joogitaanku waxay i siinaysaa faa'iidada inaan ka mid noqdo ciyaartayda ugu sareysa iyo inaan awood u yeesho inaan si wanagsan ugu adeego macaamiishayda." Iibsadaha martida loo yahay ee Linda Lawson, oo ka socda Achieve Dhiirrigelinta & Kulamada Ohio, waxay soo koobtaa laba faa'iidooyin ganacsi oo xoog leh oo xoojinaya daabacaadda ugu dambeysay ee IMEX America, oo hadda ka socota Las Vegas.
Fursado ganacsi oo xiiso leh ayaa ka dhacayay dabaqa bandhiga IMEX America.
Waxa uu sheegay mid ka mid ah ka qaybgalayaasha xidhiidhka uu dhisayay muddo 10 sano ah, bandhiggu waxa uu ahaa fursadda ugu habboon ee lagu kulmo oo fool ka fool ah oo lagu saxeexo heshiiska.
IMEX America waxay dabaysha maanta, Khamiista, Noofambar 11, ee Mandalay Bay ee Las Vegas, Nevada.
Dabaqa bandhiga ayaa u ahaa goobta fursado ganacsi oo xiiso leh sida Andrew Swanston, Madaxa Iibka, Shirarka & Dhacdooyinka ExCel London, u sharaxay: "Maalin weyn ayaan haysanay shalay. Macmiil aanu xidhiidh la samaynaynay in ka badan 10 sano ayaa doortay IMEX Ameerika oo ah meesha lagu xaqiijinayo dhacdo 6,000-ergo ah oo loogu talagalay urur caafimaad oo caalami ah sanadka 2022 - bandhiggu wuxuu ahaa fursadda ugu habboon ee lagula kulmo fool ka fool oo loo saxiixo heshiiska."
Iibsadaha martida loo yahay ee Thomas Holland, oo ka socda Caymiska Nolosha ee Atlantic Coast Life ee South Carolina, wuxuu ku daray: "Waxaan qorsheynayaa kooxo dhiirigelin ah dhowrka sano ee soo socda meelaha Yurub iyo Dubia, waxaana rajeynayaa inaan saxiixo heshiis inta lagu jiro wakhtiga aan halkan joogo safarka webiga Yurub.”
Barnaamijka waxbarashada dhamaystiran ee bandhigga (200+ fadhi) sidoo kale waa barbardhac aad u weyn sida uu martigeliyay iibsadaha Frank Gainer, oo ka socda Ururka Daaweynta Shaqada ee Maraykanka, wuxuu sharxayaa: "Waxbarashadu waa rabitaankayga waxaanan maamulaa fursadaha waxbarasho ee dhacdooyinkayga. Waxaan hadda dib u sawiraynaa sida aan u maamulno waxbarashada munaasabadahayada, kuwaas oo u dhexeeya munaasabado yaryar iyo shirar sanadle ah oo waaweyn, waxaana igu dhiirigeliyay qaabka bandhigga Inspiration Hub."
Laga soo bilaabo "cilad-xumo" ilaa dabacsanaan
Barashada bandhigga waxaa bilaabay hadal firfircoon oo ku dhiirigeliyay daawadayaasha inay ahaadaan kuwo "qallafsan." Hoggaanka Dijital ah: Shanta Caado ee Guusha iyo Farxadda Adduunka Isbeddelka Badan, qoraaga aadka u iibiya iyo hadalka dhiirigeliya Erik Qualman ayaa ka hadlay sida dabacsanaanta ay u noqotay mid ka mid ah "Awoodda cusub," gaar ahaan labadii sano ee la soo dhaafay. "Ku adkayso meesha aad u socoto, laakiin u leexo jidkaaga," ayuu kula taliyay. Guruga dhijitaalka ah waxa kale oo uu ka hadlay sida wax looga qabto "xogta, khalkhalgelinta iyo carqaladaynta" si loo qorsheeyo istaraatiijiyad dhijitaal ah dhacdo keenaysa ka-qaybgal run ah: "Ku bilow dhoola cadeyn. Ka fakar waxa u soo saari doona dhoola cadeynta macmiilkaaga oo ka shaqayso jidkaaga halkaas.
Ka qaybqaadashada dhacdada wadista iyadoo la kala saarayo tirokoobyada dadwaynaha ayaa lagaga hadlay Aan Soo afjarno Takoorka Dadweynaha, fadhi uu sameeyay David Allison, aasaasaha Valuegraphics, xog-ururinta ugu horreysa ee caalami ah ee loo sameeyay si gaar ah si ay uga caawiso ururrada inay saadaaliyaan oo saameeyaan habdhaqanka iyadoo la adeegsanayo qiyamka aan wadaagno. "Tirakoobyadu waxay qeexayaan waxa ay dadku yihiin, laakiin maaha sida loo hawlgeliyo," ayuu yidhi. Dhammaan qaybaha adduunka qiyamka ugu sarreeya ee dadku aad u daneeyaan waa Qoyska, Lahaanshaha, Xiriirka, Saaxiibtinimada iyo Bulshada. David waxa uu wadaagay sida loo isticmaalo qiyamkan muhiimka ah si loo gudbiyo fariimaha muhiimka ah.
Waxaa lagu qabtaa Hubka Waxyiga, guriga bandhiga waxbarashada dabaqa, dabeecadda aadanaha - saddex aragtiyood ayaa arkay khabiiro ka socda Dunida qaaliga ah, Biography Biography iyo TLC Lions oo hogaaminaya dood kooxeed oo ku saabsan sahaminta dabeecadda aadanaha iyo saameynta xoogga leh ee sheeko-sheekeysiga si ay u kiciso oo u hawl gasho. “Sheekadu nagama dhigayso xirfad-yaqaannimo, waxay naga dhigaysaa dad badan. Haddii aan u yeedhi karno naxariista sidii xirfad muhiim ah, in ka badan waxaan abuuri karnaa meel loo wada dhan yahay oo lagu shaqeeyo," Gian Power oo ka socda TLC Lions ayaa sharaxay.
Reef Reef waxay siisay meel nabdoon oo ka fog sagxada bandhiga si ay u nasato oo dib ugu buuxiso inta u dhaxaysa kulamada iyo fadhiyada waxbarashada. Holly Duckworth oo ka socota Hoggaaminta Solutions International waxay hogaaminaysaa barnaamijka miyir-qabka iyo fadhiyada ka fiirsashada.
IMEX America waxay hadda ka socotaa Mandalay Bay ilaa Noofambar 11.